Cuntooyinka kaladuwan ee Pizza-ka leh linguiça - Hagaajinta Caafimaadkaaga - WAAJIBAAD KU SAMEE
ACCUEIL » rasiidhada »Cuntooyinka kaladuwan ee Pizza leh linguiça - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Cuntooyinka kaladuwan ee pizza leh linguiça - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Pizza waa saxan caan ka ah adduunka oo dhan. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa ku kala duwan sida qof waliba doorbidowaxaan ka heli karnaa iskudhafyo kala duwan. Hoos, waxaan go'aansanay inaan ku soo bandhigno fikradaha iyo cuntada sida loo diyaariyo pizza macaan leh oo leh luuqad, noocyo kala duwan oo sausages ah!
Cajiinka pizza-ka oo leh linguiça
Saldhigga cajiinka had iyo jeer waa isku mid: bur, khamiir, biyo, cusbo iyo saliid saytuun. Saldhiggan, waxaad ku dari kartaa noocyo kala duwan oo xawaare ah ama geedo qalalan. Tusaale ahaan: oregano, thyme ama basil, si aad u siiso taabasho ka duwan. Xitaa waxaa jira xitaa cajiinka pizza loo diyaariyey, tusaale ahaan, oo leh qalin squid.
Waqtiga nasashada iyo habka cajiinka ayaa sidoo kale ku kala duwan cuntada sida cuntada loo kariyo, iyo sidoo kale dhumucda disc inta lagu jiro soo bandhigida cajiinka. Waa muhiim in la raaco tillaabooyinka lana ixtiraamo waqtiyada halsano.
Haddii aad doorbideyso inuu pizza-kaaga ka fiican yahay crisp, cajiinka waa inuu fiicnaadaa. Haddii aad rabto inaad jilicsan tahay oo aad ufiifiso, waxaa fiicnaan lahayd inaad cajiinka qallajiso.
Maraqa Pizza leh linguiça
Marka laga hadlayo suugada Pizza, caadiyan waxay ka kooban tahay wanaagsan Suugo yaanyo ah iyo jiiska mozzarella. Si kastaba ha noqotee, meelaha qaar ee dalka Talyaaniga, pizzas sidoo kale waxaa laga sameeyaa iyada oo aan lahayn jiis ama yaanyo.
Waxyaabaha ka haray waxyaabaha kale, waxay kuxirantahay mala-awaalkaaga iyo dhiirigelintaada. Kuwa ugu caansan waa: xabbadood oo hilib doofaar, boqoshaada, saytuun iyo dhir, laakiin waxaad isku dari kartaa dhammaan noocyada hilibka, badda iyo khudradda. Wax walba waa suurtogal, waxaa sidoo kale jira tusaale ahaan pizza linguiça!
Pizza leh linguiça iyo gantaal
Koobka 1 ee bur (200 g)
1 shaaha macmacaan (5 g)
Koobka 1 / 2 biyo kulul (100 ml)
2 miisaska saliidda sayniska (20 ml)
Qaadada 1 iyo nus koob khamiir leh (7,5 g)
Basal yar oo ah 1 (30 g)
Koobka 1 ee mozzarella (100 g)
Leaves roquette (marka loo eego dhadhanka)
Linguiça (intaad dooratay)
Koobka 1 ee Suugo yaanyo (100 g)
Si loo diyaariyo cajiinka qas walxaha qalalan, ku dar wax yar biyo iyo saliid. Dhex qas gacmaha oo cajiim ilaa iyo inta siman iyo xitaa.
U ogolow cajiinka daboolan inuu ku nasan yahay (oo leh filim ama maro) ilaa uu ka labalaabay cabbirkiisa (qiyaastii 1h30).
Dhanka kale, xaleef bolseesh digsi oo kariyo ilaa qiyaastii 5 daqiiqo, iyaga oo weecinaya.
Basasha jar julienne.
Ka qaad jirridaha isla markaana dhaq caleemaha gantaalka.
Markii cajiinka uu diyaar yahay, xoogaa bur ah saar dusha sare ee shaqada oo ku fidi gacmahaaga ilaa aad ka gaareyso qaabka aad rabto. Waxaad sidoo kale ku tababari kartaa hawada dhexdooda gacantaada.
Gali maraqa yaanyada. Hadduusan cusbo lahayn, waxbadan ayaad ku dari kartaa.
Kudar farmaajo mozzarella qaybood ama shiil.
Dhex dhig basasha iyo xawaashka la jeexjeexay.
Pizza saar dulsaar xaashiyaha wareega.
Dubo 200ºC oo loogu talagalay 15 saacadaha 20 foornada horay loo duubay.
Foornada ka saar, ka saar caleemaha arugula oo u adeeg.
Eeg sidoo kale: Guryaha cajiibka ah ee gantaalka
Pizza leh liin dhanaan iyo basbaas la dubay
Koobabka 2 ee bur (200 g)
Caanleygan macaan iyo milix (sida ay dhadhankaagu yihiin)
1 / 2 koob biyo diirran (100 ml)
Qaadista 1 iyo badh badh ah (15 g)
Qaadooyinka 3 oo saliid saytuun ah (30 g)
Baska 2 (60 g)
1 basbaas guduud (30 g)
1 basbaaska cagaaran (30 g)
5 ama 6 linguiças (30 g)
Maraqa tamaandho (adiga ku habboon)
1 badh koob oo ah mozzarella farmaajo (150 g)
Cusbo, basbaas iyo saliid saytuun ah (sida aad jeceshahay)
Eeg sidoo kale: Oo siddooyinkooda oo ah basal wanaagsan oo lagu buuqay hilibka duqadda
Si loo sameeyo cajiinka, ku dar bur, khamiir, oregano iyo cusbo. Tartiib tartiib ugu dar biyo diiran iyo saliid. Cajiim ilaa ay ka jilicsan tahay.
Ha taagnaato illaa hal saac, illaa uu mugga labanlaabmayo.
Dhanka kale, basbaaska dhig foornada. Marka maqaarka la dubay, ku dhawaad ​​madow, ka foornada foornada oo wax yar ha qaboobo.
Peel basbaaska iyo googooyaa.
Digsi, waxaad ku shub dhibic saliid saytuun ah inaad u casaan basasha, ka dibna ku dar basbaaska iyo xawaashka. Ku dar maraqyada jeexan. Book.
Marka cajiinka ay diyaar ahaadaan, ku fidi faridahaa oo duuban. Waad u sameyn kartaa qaab ku habboon, khafiif ama khafiif ah.
Dhig Suugada yaanyada dushiisa korna u qeybi si siman (waxaad isticmaali kartaa burush).
Ku dar bolseelka isku dar ah, basasha iyo basbaaska.
Dhex dhig farmaajada mozzarella miiska dushiisa.
Pizza saar digsiga wareega oo kari ilaa qiyaastii 20 daqiiqadood foornadii horay loo sii diyaariyey ilaa 200 ° C.
Siyaabaha loo yaqaan '4' si loogu keeno dhadhan dheeri ah si loosaaro pizzas-kaaga
Pizza waa mid ka mid ah cunnooyinka ugu caansan adduunka, ma ahan oo keliya sababtoo ah waa cunno qaadista laakiin waxaa jira kala duwanaansho badan. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/recettes-variees-de-pizza-a-la-linguica/
Protein Smoothie leh Khudaarta cagaaran iyo Hemp - Hagaajinta Caafimaadkaaga
TECH & TELECOM2,068